Samsung waxay ku shaqeysaa laba nashqadood oo isku laaban laba shaashadood | Androidsis
Sida laga soo xigtay tilmaamaha ugu dambeeyay ee la muujiyay, Samsung Display waxay ku shaqeyneysaa laba muuqaal oo isku laaban oo leh 8 ″ iyo 13 ″ nooc. Xayndaabyada ayaa la filayaa inay diyaar noqdaan sanadkan, laakiin ma cadda goorta aaladaha ugu horreeya ee isticmaalaya ay soo muuqanayaan.
Sida ku cad daabacaadda Kuuriya ee The Bell, laba naqshadood oo kala duwan ayaa la soo saaray: nooca 'G' iyo nooca 'S'. Xarfaha waxaa loogu talagalay in lagu muujiyo qaabka, laakiin sawirrada hoose waa inay tan sii caddeeyaan.
Dhawaqa codkiisa awgiis, shaashadda 8-inch shaashaddu waxay noqon doontaa nooca 'G', halka shaashadda 13-inji ay noqon doonto nooca 'S'. Labaduba waxay la tartami doonaan sida iPad mini iyo iPad Pro, siday u kala horreeyaan, oo leh shaashado isku cabbir ah.
Shaashad isku laaban oo nooca 'G' ah
Shaashadda isku laaban 'S'
Shaashadda nooca 'G' ayaa shaashad firfircoon uga tegeysa dhabarka markii laalaabo. Nooca 'S', dhanka kale, wuxuu shaashadda ku yeelan doonaa oo keliya xagga hore.
Waxaa macquul ah inay noqon doonaan qaraarka FullHD, sida kan Galaxy Fold. Si kastaba ha noqotee, maadaama ay muujinayaan fikrad kale, dammaanad kama qaadi karno tan ama faahfaahin kale ... ugu yaraan maya waqtigan. Si kastaba ha noqotee, waxay u badan tahay in maalmaha ama toddobaadyada soo socda aan waxbadan ka ogaan doonno kuwan.
Dhinaca kale, aaladaha ifin doona waxay noqon laheyd sheeko cajiiba, sida ku xusan Galaxy Fold ee shirkadda ama sidoo kale laabashada Mate X Huawei, taas oo, sida ay fikradaha badankood, uga gudbeen qaabeynta iyo qeybaha kale. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu qalabeyn lahaa qaybaha ugu dambeeya, sida Snapdragon 855 ama ay khusayso Exynos 9820 ee shirkadda, iyo sidoo kale xusuusta RAM oo aan ka yarayn 8 GB iyo meel lagu kaydiyo oo aan ka yarayn 128 GB.
Sidoo kale, waxaan mar labaad xoogga saareynaa taas waxa kaliya ee "kooban" ee aan ilaa hadda hayno waa sawirradan. Wax kasta oo kale waxay noqon lahaayeen mala-awaal iyo xanta intaa ka badan, illaa ay ka noqdaan rasmi oo ay shirkaddu u xaqiijiso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Samsung waxay ku shaqeysaa laba nashqadood oo isku laaban laba shaashadood